Khatarada ka imaan karta tareenada waddada ka baxa oo laga digey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Anders Wiklund / TT
Khatarada ka imaan karta tareenada waddada ka baxa oo laga digey
Publicerat fredag 21 februari 2014 kl 14.36
Shaqaalaha wakaaladda gaadiidka iyo waddooyinka ayaa muddo ka digaayey khatarta ka iman karta in tareenadu ay waddooyinka ka baxaan oo qallibmaan waddooyinka dayactir-xumo ka jirto awgeed. Balse jawaab ah kama aysan helin hoggaanka wakaaladda.
Dhanka agaasimaha guud ee wakaaladda gaadiidka iyo waddooyinka Gunnar Malm ayaa sheegay in ay labaatankii sano ee ugu dambeeyey ay tareenada waddooyinka ka baxaa soo yaraadeen, laakiin uu si dhab u eegayo welwelka shaqaalaha, baaritaanna lagu sameyn doono waxyaalaha ay shaqaaluhu ka cabanayaan.
– Haddii ay dhacday in digniino iyo warar arrintaan ku saabsan ay yimaadeen oo aan loo indha-furnaan, kolkaas waxaan run ahaantii u arkaa arrin khatar ah. aniga ayaana mas’uul ka ah in arrimaha noocaan oo kale ah la soo qaado oo hoos loo eego, ayuu yiri Gunnar Malm, agaasimaha guud ee wakaaladda gaadiidka iyo waddooyinku.
Dowladda, xisbiyada mucaaradka ah, wakaaladda gaadiidka iyo waddooyinka iyo ururka shaqaalaha intuba waxay xaqiijiyeen in dib u dhac haysto dayactirka waddooyinka tareenada. Balse waa lagu fkaar kala duwan yahay heerka ay khatartaasi le’eg tahay in tareenadu waddooyinka ka baxaan.
Dad badan oo shaqaalaha ka mid ah oo ay idaacadda Ekot waraysi la yeelatay waxay sheegeen in walaac iyo cabsiyi ka dhex jirto shaqaalaha gaadiidka tareenada.